Nidina An-dàlambe Ny Haitiana Ho Fanoherana Ny Voka-Pifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2015 3:53 GMT
Hetsi-panoherana taorian'ny fifidianana parlemantera, Jacmel, #Haiti. Sary avy amin'i Georgia Popplewell, nampiasàna ny fahazoandàlana CC BY-NC-SA 2.0.
Taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tany Haiti tamin'ny 25 Oktobra 2015 –fifidianana faharoa hatramin'ny nisian'ilay horohorontany nandrava tamin'ny 2010 — dia roboka tao anatin'ny hetsi-panoherana mahery vaika manohitra ny valim-pifidianana izay lazain'ireo mpanao fihetsiketsehana fa hosoka ny firenena. Raha araka ny lalàm-panorenana dia tsy mahazo milatsaka ho fidiana amin'io fifidianana io ny filoha amin'izao fotoana izao, Michel Martelly, koa satria tsy nisy mpifaninana nahazo ny antsasa-manila tamin'ny fihodinana voalohany , dia hatao amin'ny 27 Desambra ny fihodianana faharoa.
Raha vao navoakan'ny Filànkevitra vonjimaika momba ny fifidianana (CEP) any Haiti ny vokatra vonjimaika, dia voalaza fa i Jovenel Moïse atosik'i Martelly, izay any New York sy Miami, manao fampielezan-kevitra manandrana maka ny fon'ny Haitiana any am-pielezana amin'izao fotoana izao no nahazo ny 32.,21%-n'ny vato, 25,27% kosa ny an'i Jude Célestin, mpifaninana avy amin'ny antoko Unity (INITE) an'ny filoha teo aloha Renè Préval. Tsara ny manamarika fa taorian'ny fifidianana teo amin'ny firenena tamin'ny 2010-2011 dia nisy ihany koa ny filazana hosoka sy hetsi-panoherana mahery vaika izay nahatonga ny CEP hanala an'i Célestin tamin'ny fifaninanana ka nosoloana an'i Martelly, izay nandresy an'i Mirlande Manigat.
Amin'ity indray mitoraka ity, anefa, dia vonona hiady i Céléstin. Niaraka tamin'ireo dimy hafa mpifaninana ho fidiana ho filoha nanao fanambarana nantsoiny hoe vokatra “manohintohina ny demokrasia” izy. Namaly ny fiantsoana fivoriana ireo mpanohana azy ary nanomboka nidina an-dàlambe. Vetivety foana dia raikitra ny fiarahana — nanomboka niditra an-tsehatra tamin'ny hetsika ihany koa ireo mpomba ny mpifaninana hafa, isan'izany ry Jean-Charles Moïse izay nahazo ny laharana fahatelo tamin'ny fifidianana, sy ry Maryse Narcisse, solontenan'ny antoko Fanmi Lavalas an'ny filoha taloha Jean-Bertrand Aristide. Nolavin'ny antokon'i Martelly ny filazana fa nitsabaka tamin'ny fikarakarana ny fifidianana ny antoko, saingy nisy tsindry navesatra avy amin'ny vahoaka ho an'ny CEP mba hilaza hoe foana sy tsy manankery ny fifidianana — ivelany sy tao anatin'ny aterineto.
Nozaraina tao amin'ny Twitter ihany koa ireo sary sy lahatsarin'ny hetsi-panoherana :
Fihetsiketsehana momba ny filazana ny hosoka tamin'ny #fifidianana tany #Haiti androany. Mizotra ho any Petionville
#Haitians making their way through streets of Port-Au-Princepic.twitter.com/zisQ3KxbYY
Mandeha mamakivaky ny làlan'i Port-Au-Prince ireo #Haitians
Nisy ihany koa ny adihevitra momba ny valintenin'i Etazonia momba ny toe-draharaha :
@HBeaucejour @RAMhaiti Manodidina ny 12.000 no bitsika avy any amin'ny @USEmbassyHaiti — fa tsy misy na dia teny iray aza momba ny halatra amin'ny #HaitiElections.
Mon: Inona no tian'ny Masoivohon'i Etazonia any #Haiti lazaina momba ny vokatry ny fangalàna ny hevitry ny olona amin'ny hoe 6% ihany no nifidy ny antoko eo amin'ny fitondrana an'i Jovena Moise?
Notantarain'i Jacqueline Charles solontenan'ny Miami Herald tao amin'ny kaontiny Twitter fa niaraka marobe nidina an-dàlambe tamin'ireo Haitiana izay tsy tsara fifandraisana aminy ireo mpikambana amin'ny Iraky ny Firenena Mikambana handamina an'i Haiti :
.@MINUSTAH backup are also out on the streets to help @pnh_officiel with today's #Haiti protest.. pic.twitter.com/BCvFMiiaqp
Teny an-dàlambe ihany koa ny @MINUSTAH mpanavotra mba hanampy ny @pnh_officiel tamin'ny hetsi-panoherana tao #Haiti androany
.Teny an-dàlamben'i Port-Au-Prince izay nanaovan'ireo mpanao fihetsiketsehana an'arivony fanehoankery ihany koa ny mpitandro filaminana @MINUSTAH.
Tian'ny ankamaroan'ny Haitiana hiala ny nosy ny tafiky ny MINUSTAH. Nampangaina fa nanao herisetra, herisetra ara-nofo ary loharanon'ny valan'aretina kolera izay nandripaka an'i Haiti volana vitsy monja taorian'ny vokatry ny horohorontany namely ny firenena ireo mpikambana ireo, teo aloha teo.
Mazava fa antenain'ny Haitiana fa hanampy ny firenena amin'ny fizorana mankany amin'ny fizakantena bebe kokoa amin'ny raharahany ny feon'izy ireo momba io fifidianana io. Zarain’ny bilaogy HaitiRozo ny heviny momba ny fizotran'io fifidianana io :
Nandeha nifidy ny filoha sy ireo mpikambana ao amin'ny antenimiera anankiroa, ny sampana mpanao lalàna sy ireo manampahefana ao an-toerana ny vahoaka Haitiana tamin'ny 25 Oktobra. Nidera ny mpifidy Haitiana ireo manampahefana ao an-toerana sy iraisampirenena nanomboka tao Haiti ka hatrany amin'ny vazantany efatra, noho ny faharetany, ny fahavitrihany ary ny hafanampony hampiasa ny vatony mba hananan'ny firenena mpitarika vaovao . Nisy ihany anefa ny tatitra momba ny hosoka.
Hatrany am-boalohany dia efa nazava fa hisy fihodinana faharoa ny fifidianana izay handimby ny Filoha Michel Joseph Martelly. Heveriko, amin'izao, fa tokony avelantsika hiady hevitra momba ireo vokatra ireo manoloana ny fitsarana manokana ireo mpifaninana ireo. Tsy tokony hitranga amin'ny 2015 intsony ny zava-nisy tamin'ny 2010 ho an'ny tombontsoa ambonin'i Haiti. Tsy tokony hitsabaka amin'ny adihevitra ny vondrona iraisampirenena. Avelao ny vahoaka Haitiana hitantana ny raharahany. Misaotra.
Jamaika 3 andro izay